FaRa 27 - Kitaabka Quduuska [Somali Bible 2008]
Serbian 1865 Serbian Laatiin 1865
Bulgaria 1940 Bulgarian 1914
Asebajaan 1878 Azerbaijan Koonfurta
Isloofiniyaan 2008 Slovenia 1882
Laatfiyaan LJD Latvia Gluck
Hangariyaan 1975 Hangariyaan Karoli 1589
Finnishka 1933 Finnishka 1776 Finnishka 1992
Noorwiijiga 1930 Noorwiijiga 1921
Iswiidishka Folk 1998 Iswiidishka 1917 Iswiidishka 1873
Giriig 1770 Giriigga GNT 1904 Giriigga Modernka 1904 Giriigga 1994
Jarmal 1951 Jarmal Elber 1905 Jarmal Luther 1912 Jarmal 1545
Holland 1637 Holland 1939 Holland 2007
Deenish 1931 Deenish 1819
Faransiis 1910 Faransiis Darby Faransiis Yeruusaalem Faransiis Vigouroux Basquu
Talyaani CEI 1971 Talyaani La Nuova Diodati Talyaani Riveduta
Isbanish 1989 Isbaanish 1909 Isbanish 1569
Boortaqiis 1993 Boortaqiis Almeida 1628 Boortaqiis Almeida 1753 Boortaqiis CAP Boortaqiis VFL
Turki HADI 2017 Turki 1989
Hindi HHBD Hindi 2010 Gujaraati Kannadays Malayalam Maarati Оdia Taamilka Teluugu
Nebali 1914 Nebali Tamang 2011
Filibiin 1905 Sugbaano Tagalog
Afrikaanays Xhosa Sulu Sotho
Amhar 1962 Amxaariga DAWRO Amxaariga GOFA Amxaariga GAMO Amxaariga Tigrinya Wolaytta
Urdu 2000 Urdu 2017 Bunjaabi
Carabi NAV Carabi SVD
Iiraani 1895 Iiraani Dari 2007
Indonesia 1974 Indonesia BIS Indonesia TL Indonesia VMD
Fiitnaamiis ERV 2011 Fiitnaamiis NVB 2002 Fiitnaamiis 1926
Shiinaha Fududeeyay 1919 Shiinaha Dhaqameed 1919 Shiinaha Fududeeyay Cusub 2005 Shiinaha Dhaqameed Cusub 2005 Shiinaha Dhaqameed ERV 2006
Jabbaan 1954 Jabbaan 1965
Kuuriyaan 1961 Kuuriyaan KLB Kuuriyaan TKV Kuuriyaan AEB
Ingiriisi ESV Ingiriisi NASB Ingiriisi NIV Ingiriisi NLT Ingiriis Amplified Ingiriis Darby Ingiriisi ASV Ingiriisi NKJ Ingiriisi KJ
Aramaatiga Laatiin 405 Isberento Coptic Coptic Sahidic
Kitaabka Quduuska ah muddo hal sano ah
Aayaddan of Maalinta
Ruush Synodal Beleruusiyaan Yukreeniyaan Polish 1975 Polish 1910 Serbian 1865 Serbian Laatiin 1865 Bulgaria 1940 Bulgarian 1914 Slovakia Czech 2009 Czech Ekumenicky Czech Kralichka 1613 Czech Kralichka 1998 Romania Asebajaan 1878 Azerbaijan Koonfurta Ermeni Albaaniyaan Isloofiniyaan 2008 Slovenia 1882 Croatian Istooniyaan Laatfiyaan LJD Latvia Gluck Lithuanian Hangariyaan 1975 Hangariyaan Karoli 1589 Finnishka 1933 Finnishka 1776 Finnishka 1992 Noorwiijiga 1930 Noorwiijiga 1921 Iswiidishka 1917 Iswiidishka 1873 Iswiidishka Folk Ayslandays Giriig 1770 Giriigga GNT 1904 Giriigga Modernka 1904 Giriigga 1994 Cibraaniga Jarmal 1951 Jarmal 1545 Jarmal Elber 1905 Jarmal Luther 1912 Holland 1637 Holland 1939 Holland 2007 Deenish 1931 Deenish 1819 Welish Faransiis 1910 Faransiis Darby Faransiis Yeruusaalem Faransiis Vigouroux Basquu Talyaani 1971 Talyaani La Nuova Diodati Talyaani Riveduta Isbaanish 1909 Isbanish 1569 Isbanish 1989 Jamaica Boortaqiis 1993 Boortaqiis Almeida 1628 Boortaqiis Almeida 173 Boortaqiis CAP Boortaqiis VFL Nahuatl Kiche Q'eqchi Quechuan Cusub Sjælland Malaysian Papua New Guinea 1997 Papua New Guinea Tok Pisin Turki 1989 Turki HADI Hindi HHBD Hindi ERV 2010 Gujaraati Kannadays Malayalam Maarati Оdia Taamilka Teluugu Burma Nebali 1914 Nebali Tamang Filibiin Sugbaano Tagalog Kamboodiya 1954 Khmer 2012 Kazakhstan Taay Afrikaanays Xhosa Sulu Sotho Amhar 1962 Amxaariga DAWRO Amxaariga GOFA Amxaariga GAMO Amxaariga Tigrinya Wolaytta Nigeria Dinkaha Algeria Sabeenood Sawaaxili Marooko Soomaaliya Shona Madagascar Romani Gambia Kurdishka Haiti Bengali 2001 Bengali 2017 Urdu 2000 Urdu 2017 Bunjaabi Carabi NAV Carabi SVD Iiraani 1895 Iiraani Dari 2007 Indonesia 1974 Indonesia BIS Indonesia TL Indonesia VMD Fiitnaamiis 1926 Fiitnaamiis ERV Fiitnaamiis NVB Shiinaha Fududeeyay 1919 Shiinaha Dhaqameed 1919 Shiinaha Fududeeyay Cusub 2005 Shiinaha Dhaqameed Cusub 2005 Shiinaha Dhaqameed ERV 2006 Jabbaan 1954 Jabbaan 1965 Kuuriyaan 1961 Kuuriyaan AEB Kuuriyaan KLB Kuuriyaan TKV Ingiriisi ESV Ingiriisi NASB Ingiriisi NIV Ingiriisi NLT Ingiriis Amplified Ingiriis Darby Ingiriisi ASV Ingiriisi NKJ Ingiriisi KJ Aramaatiga Laatiin Isberento Coptic Coptic Sahidic
Jir Axdiga Hore
Bil Bax Laaw Lamb ShKu Yas Gar Ruu 1Sam 2Sam 1Bo 2Bo 1Ta 2Ta Ces Nex Est Ayu Sab Maa Wac GaSu Ish Yer Bar Eze Daa Hoo Yo Caa Cob Yoo Mii Nax Xab Sef Xag Sek Mal
Cusub Axdiga Hore
Mat Mark Luk Yoo FaRa Roo 1Kor 2Kor Gal Efe Fil Kol 1Tes 2Tes 1Tim 2Tim Tii Fil Cib Yac 1But 2But 1Yox 2Yox 3Yox Yuu Muu
Somali Bible 2008
Haddaba markii la goostay inaannu Itaaliya u dhoofo ayaa Bawlos iyo dhawr kale oo maxaabiis ah waxaa loo dhiibay boqol-u-taliye magiciisa Yulyos la odhan jiray oo ka tirsanaa ciidankii boqorka.
Oo waxaannu fuulnay doonni Adramuteyon ka timid oo u dhoofaysay meelaha xeebta Aasiya ku yaal, markaasaannu dhoofnay oo waxaa nala socday nin Aristarkhos la odhan jiray oo reer Makedoniya ahaa oo Tesaloniika ka yimid.
Oo maalintii dambe waxaannu nimid Siidoon; markaasaa Yulyos u naxariistay Bawlos oo fasax u siiyey inuu saaxiibbadiis u tago oo uu dhaqaalo ka helo.
Oo haddana halkaas waannu ka dhoofnay, oo waxaannu ka hoos marnay Qubrus, maxaa yeelay, dabayshu waa na haysay.
Oo markii aannu ka gudubnay badda u dhow Kilikiya iyo Bamfuliya, waxaannu nimid Mura oo ku taal Lukiya.
Oo halkaas boqol-u-taliyihii wuxuu ka helay doonni Iskanderiya ka timid oo u dhoofaysa Itaaliya; markaasuu na fuushiiyey.
Oo kolkii aannu maalmo badan aayar soconaynay, waxaannu dhib ku nimid Kinidos horteeda, oo dabayshii ayaa noo diiday inaan hore u sii soconno, kolkaasaannu ka hoos marnay Kereetee oo ka hor jeedda Salmoonee.
Oo markii aannu dhib ku dhaafnay, waxaannu nimid meel magaceeda la yidhaahdo Marsooyin Wanaagsan oo u dhow magaalada Lasaya.
Markii wakhti badanu dhammaaday, oo haatan dhoofku halis ahaa, maxaa yeelay, Soonkii goor horaa la soo dhaafay, ayaa Bawlos waaniyey iyagii,
oo wuxuu ku yidhi, Niman yahow, waxay ila tahay in dhoofkanu lahaan doono waxyeello iyo khasaaro badan, umana ahaan doonaan shixnadda iyo doonnida oo keliya, laakiin xataa nafaheennu khatar bay ku sugan yihiin.
Laakiin boqol-u-taliyihii wuxuu dhegaystay hadalkii naakhudihii iyo ninkii doonnida lahaa intuu dhegaysan lahaa waxyaalihii Bawlos yidhi.
Oo marsadaasu ma ay ahayn mid ku wanaagsan in wakhtiga qabowga la joogo, sidaas daraaddeed ayaa dadkii intiisii badnayd waxay ku talisay in halkaas laga sii dhoofo, haddii si uun lagu gaadhi karo Foynikis oo halkaas wakhtiga qabowga la joogo, taasoo ah marso Kereetee ku taal oo u jeedda woqooyi-bari iyo koonfur-bari.
Oo kolkii dabayshii koonfureed tartiib u socotay ayay waxay u maleeyeen inay qastigoodii heleen, kolkaasay barroosinkii qaadeen, oo waxay ag mareen Kereetee.
Laakiin wakhti aan dheerayn dabadeed ayaa waxaa ka soo kacay duufaan weyn oo magiciisa la yidhaahdo Yurokludoon;
oo markii doonnidii la qabsaday oo ay wejiga siin kari weyday dabaysha, ayaannu iska dhiibnay, kolkaasay na kaxaysatay.
Oo waxaannu ku orodnay gasiirad yar oo Kalawda la yidhaahdo dugsigeed, oo annagoo aad u dhibtoonnay ayaan waxaan awood u helnay inaan huurigii aad u xidhno;
Oo kolkii ay kor u soo bixiyeen ayay waxay ku isticmaaleen xadhko wax tara oo doonnidiina way adkeeyeen, oo iyagoo ka cabsanaya inay Surtis oo bacaad ah ku dhacaan, ayay waxay dejiyeen shiraaqii, oo sidaasaa loo kaxaystay.
Oo sidii aannu duufaankii aad ugu hawshoonaynay, ayay maalintii dambe shixnaddii badda ku tuureen.
Oo maalintii saddexaadna waxay gacmahoodii ku tuureen alaabtii doonnida.
Oo markii intii maalmo badan ah ayan qorraxdii iyo xiddigihii toona ifin, oo duufaan aan yaraynuna uu nagu dhacayay, ayaa rajadii aannu badbaado ku rajaynaynay oo dhan nalaga qaaday.
Oo kolkii ay wakhti dheer cuntola'aan sii joogeen ayaa Bawlos dhexdooda istaagay, oo wuxuu ku yidhi, Niman yahow, waxaa idinku habboonayd inaad i maqashaan oo aydaan Kereetee ka soo dhoofin oo helin waxyeelladan iyo khasaaradan toona.
Haddaba waxaan idinku waaninayaa inaad kalsoonaataan; waayo, midkiinna nafta waayi maayo, laakiin waxaa keliyahoo dumaya doonnida.
Waayo, xalayto ayaa waxaa i soo ag istaagtay malaa'igtii Ilaaha i leh oo aan weliba u adeego.
Waxay igu tidhi, Bawlosow, ha cabsan; waayo, waa inaad Kaysar hortiisa istaagtaa; oo weliba bal eeg, Ilaah wuxuu adiga ku wada siiyey kuwa kula socda oo dhan.
Haddaba, niman yahow, kalsoonaada, waayo, anigu Ilaah waan rumaysanahay inay noqon doonto sidii la ii sheegay.
Habase yeeshee waa inaynu ku dhacno gasiirad.
Laakiin intii badda Adriya hore iyo gadaal nalagu kaxeeyey, kolkii habeenkii afar iyo tobnaad la gaadhay, goor habeenbadhkii ku dhow, ayaa baxriyiintii waxay u maleeyeen inay dhul ku soo dhowaanayeen;
kolkaasay moolkii badda qiyaas ka qaadeen, oo waxay heleen inuu yahay labaatan baac, oo haddana kolkay in yar socdeen ayay mar kale qiyaas qaadeen, oo waxay heleen inuu yahay shan iyo toban baac.
Waxay ka cabsadeen inaannu ku dhacno meelo dhagaxyo leh, markaasay waxay doonnida xaggeeda dambe ka tuureen afar barroosin, oo waxay aad u jeclaysteen in maalin noqoto.
Oo baxriyiintii ayaa waxay damceen inay doonnida ka baxsadaan, oo waxay badda qarsoodi ugu dejiyeen huurigii sidii iyagoo barroosinno ka tuuraya doonnidii xaggeeda hore.
Markaasaa Bawlos boqol-u-taliyihii iyo askartii ku yidhi, Kuwanu haddayan doonnida sii joogin, idinku badbaadi kari maysaan.
Markaasaa askartii xadhkaha huuriga ka jareen oo ay huurigii sii daayeen inuu dhaco.
Oo intii waagu soo beryayay, ayaa Bawlos wuxuu dadkii oo dhan ka baryay inay wax cunaan, oo wuxuu yidhi, Maanta waa maalintii afar iyo tobnaad intii aad sugayseen oo aad iska soomanaydeen, oo aydnaan waxba qaadan.
Haddaba waxaan idinka baryayaa inaad cunto qaadataan, waayo, taasu waa caafimaadkiinna aawadiis; maxaa yeelay, midkiinna tin keliyahu ka go'i maayo madaxiisa.
Oo markii uu saas yidhi, ayuu wuxuu soo qaatay kibis, oo dadkii oo dhan hortooda ayuu Ilaah ugu mahad naqay, oo intuu kala jebiyey ayuu bilaabay inuu wax cuno.
Markaasay wada dhiirranaadeen dhammaantood, oo iyagiina wax bay cuneen.
Oo intayadii doonnidii ku jirtay oo dhammu waxaannu ahayn laba boqol iyo lix iyo toddobaatan qof.
Oo markii ay cuntada ka dhergeen, ayay doonnidii fududeeyeen, oo sarreenkiina waxay ku tuureen badda.
Oo markii waagii beryay, ayay dhulkii garan waayeen; laakiin waxay arkeen marso xeeb leh, oo waxay doonayeen inay doonnidii halkaas ku kaxeeyaan hadday karaan.
Markaasay barroosinnadii badda ku xooreen oo badda ku sii daayeen, oo isla markaasba waxay fureen xadhkihii shukaanaha ku xidhnaa, oo intay shiraaqii dabaysha u sii daayeen, ayay xeebta ku hagaageen.
Laakiin waxay ku dhaceen meel laba badood isaga darmadaan, markaasaa doonnidii dhulka ku dhufatay; oo dhankeedii hore ayaa meel ku liimbaaday oo waxay noqotay wax aan la dhaqdhaqaajin karin, laakiin dhankii dambe wuxuu bilaabay inuu ku burburo mawjadihii xooggooda.
Markaasaa askartii waxay ku taliyeen inay maxaabiista laayaan, si aan midkoodna intuu dabaasho uga baxsan.
Laakiin boqol-u-taliyihii oo doonayay inuu badbaadiyo Bawlos, ayaa qastigoodii ka joojiyey; oo wuxuu amray in kuwa dabaalan karaa ay doonnida iska tuuraan, oo ay marka hore dhulka tagaan;oo inta kalena qaar ha ku dabaasho looxaan, qaarna waxyaalo kale oo ay doonnida ka sii qaataan. Oo sidaas daraaddeed waxay noqotay inay dhammaantood dhulkii u baxsadeen iyagoo nabdoon.
oo inta kalena qaar ha ku dabaasho looxaan, qaarna waxyaalo kale oo ay doonnida ka sii qaataan. Oo sidaas daraaddeed waxay noqotay inay dhammaantood dhulkii u baxsadeen iyagoo nabdoon.
Somali Bible © 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya